Chishanu, June 10, 2022 Chishanu, June 10, 2022 Ed Breault
Kana zvasvika pakuchengeta uye kuronga zvemukati, kune akati wandei mhinduro kunze uko- funga zvemukati manejimendi masisitimu (CMS) kana mafaera ekubata masevhisi (seDropbox). Digital Asset Management (DAM) inoshanda pamwe chete nemhando idzi dzemhinduro-asi inotora nzira yakasiyana kune zvirimo. Sarudzo dzakaita seBhokisi, Dropbox, Google Drive, Sharepoint, nezvimwe .., zvinonyanya kuita senge nyore nzvimbo dzekupaka dzekupedzisira, dzekupedzisira-nyika midziyo; havatsigire maitiro ese ekumusoro anoenda mukugadzira, kuongorora, uye kutonga izvo zvinhu. Panyaya yeDAM
accessiBe: Ita Chero Saiti Yakasimbiswa Inowanikwa Uchishandisa Artificial Intelligence
Chipiri, May 31, 2022 Chipiri, May 31, 2022 Douglas Karr
Nepo mirau yekuwanikwa kwesaiti yanga iripo kwemakore, makambani anga achinonoka kupindura. Handitendi kuti inyaya yekunzwira tsitsi kana tsitsi kudivi remakambani… Ndinotenda zvechokwadi kuti makambani ari kungonetsekana kuti afambirane. Semuenzaniso, Martech Zone chinzvimbo chakashata kuti chiwanikwe. Nekufamba kwenguva, ndanga ndichishanda kuti ndivandudze ese kukodha, dhizaini, uye metadata inodiwa… asi handikwanisi kuenderana nekungochengeta
Luminar Neo: Inovandudza Mufananidzo Kugadziriswa Uchishandisa Artificial Intelligence (AI)
Chishanu, May 27, 2022 Chishanu, May 27, 2022 Douglas Karr
Isu nguva pfupi yadarika takagovera chinyorwa chine mienzaniso mitanhatu yekuti hungwaru hwekugadzira hunowedzera sei kutengesa uye tekinoroji yekushambadzira uye imwe yenzira yaive kugadzirisa mafoto. Vazhinji vevatori vemifananidzo vatinoshandisa kuita mifananidzo yehunyanzvi, mapikicha echigadzirwa, uye mamwe mafoto evatengi vedu inyanzvi paPhotoshop uye vanoita basa rakanakisa. Nekudaro, kana basa rako renguva yakazara risiri kugona kutora mafoto uye kugadzirisa mafoto, Adobe's inoshamisa chikuva ine yakadzika yekudzidza curve. Luminar
Munyori: Gadzira, Shamba, uye Isa Inzwi reChiratidzo Chako uye Chimiro Chinotungamira neiyi AI Kunyora Mubatsiri.
China, May 12, 2022 China, May 12, 2022 Douglas Karr
Sezvinongoita kambani inoshandisa gwara rechiratidzo kuti ive nechokwadi chekuenderana mukati mesangano rese, zvakakoshawo kukudziridza izwi nemaitiro kuti sangano rako rienderane mukutumira mameseji. Inzwi rerudzi rwako rakakosha kuti utaure mutsauko wako zvinobudirira uye kutaura zvakananga uye nemoyo kubatana nevateereri vako. Chii Chinonzi Izwi Uye Chimiro Chinotungamira? Nepo madhairekitori ekuona anotarisisa marogo, mafonti, mavara, uye mamwe masitaera ekuona, izwi